Iskaashatada Hiliblayaasha Oo Maayarka Hargeysa Ku Eedeeyay Fara Gelin Uu Ku Hayo | Somaliland.Org
Guddoomiyaha ururka Nafaqo, Dayib Cumar Khaahin iyo xoghayaha ururkaasi Ciise Kayse Waramahaye oo shabakada wararka Somaliland.Org, ayaa si wada jir ah waxa ay u dhaliileen faro gelin qaawan oo ay sheegeen in maayarka caasimada Hargeysa Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir uu ku hayo maamulka iskaashatada hilibka ee Nafaqo.
Guddoomiyaha iskaashatada hilibka ee Nafaqo waxa uu sheegay in ururka Nafaqo yahay mid soo jireen ah isla markaana uu yahay kan ugu wayn ururada hiliblayaasha ee ka jira Hargeysa.
Dayib Cumar waxa uu sheegay in ururka Nafaqo hogaankiisu ay wakhtiyadii hore qaab wanaagsan u shaqayn jireen wax khilaaf ahna aanu lahaan jirin, balse sanadihii u danbeeyay xubnaha hogaanka ururkaasi ay ka dhex jirtay kala qaybsanaan, isqabqabsi, taasina ay ugu wacan tahay in maamul kasta oo loo dhiso ururkaasi maayarka caasimadu uu fargelin ku sameeyo, isla markaana ku dadaalo in aanay gacantiisa ka bixin, isaga oo dano gaara ka leh.
Md. Dayib ayaa u soo jeediyay xukuumadda dhexe gaar ahan wasiirka arrimaha gudaha in uu goob joog ka ahaa shirkii sida sharciga ah loogu doortay hogaanka ururka.“Waxaan u sheegayna madaxda qaranka gaar ahaan wasiirka arrimaha gudha oo markhtaari ka ahaa fasaxayna qabsomidiisa shirweynihii sida xalaasha ah u dhacay ee lagu dortay hogaanka ururka ee hadda jooga, in haddana maayarku ka dhega adaygayo la shaqaynta maamulka cusub, iyada oo xubnihii hore ee shirweynaha lagu bedelayna aanay ilaa hadda xilkii wareejin, aiyaga oo leh maayarka ayaa noo dhiibtay,” ayuu yidhi Md Dayib.
Waxaanu intaasi raaciyay “Wadashaqayn way naga dhaxaysaa maayarka, laakiin wuxa uu doonaa in uu dano gaara ka dhex fushado, marka ururku laba garab u kala jabo, isaga oo maayarka la sii ogaysiiyay markii uu shirkaasi dhacayay ayuu haddana keenay maayarku in uu cagajiid ka sameeyo maamulka cusub, marka waxaanu ku wargleinaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo in badan maqlayay cabashada hiliblaha in uu nooga markhaati kaco in maayarku warqadii uu soo qoray ee ahayd waxaan la shaqaynayaa maamulkii hore, maadaama oo aanay shirkii lagu doortay maamulka cusub ku qabsanin hoolka dawlada hoose.” Ayuu yidhi guddoomiyaha ururka Nafaqo.
Waxa kale oo uu guddoomiyaha Nafaqo ku dooday in aanay sharci ahayn in ururkoodu shirarka ku qabsado xarunta dawlada hoose, isla markaana ay la mid yihiin ururada bulshada ee dalka ka jira, balse maayarku ku andacoonayo in aan shirkii lagu doortay hogaanka cusub ee Nafaqo ka dhicin hoolka dawlad ahoose. Isaga oo xusay in taasi ay cadayn u tahay in maayarku doonayo in uu gacantiisa ku jiro ururku.
“Ururada bulshada ayaanu ka mid nahay in aanu shirkayaga ku qabsano xarunta dawlada hoose mid sharci ah maaha, huteelka anu doono ayaanu shirkayaga ku qabsanaynaa, waxyaabaha uu ku andacoonayo maayarku waxa ay cadaynaysaa in uu guddoomiye noo yahay oo uu gacanta nagula jiro mar kasta. Waxa muuqata in guddoomiyihii hore ee Nafaqo ee xilka laga qaaday iyo Jiciir isku xidhan yihiin”.
Md Dayib waxa uu xusay in shirweyinihii lagu doortay hogaanka iskaashatada Nafaqo uu ahaa mid caalami ah qaab cadaalad ahna u dhacay, isla markaana ay ka soo qayb galeen masuuliyiin kala duwan oo heer qaran ah iyo xubno ka socday ururada dawliga ah.
Dhinaca kale, xoghayaha ururka Nafaqo Ciise Kayse Warmahaye oo isna arrimahaba ka hadlay ayaa sheegay in ay yihiin hogaanka Nafaqo ee sida sharciga ah loo soo doortay isla markaana shirkii lagu doortay ay ka soo qayb galeen madax badan oo heer qaran ah.
Md. Warmahaye ayaa u soo jeediyay maayarka caasimada in uu si wanaagsan ula shaqeeyo “Waxaan leeyahay maayar wadashaqayn wanaagsani ha ina dhex marto anagu waxaanu nahay maamulkii nafaqo ee sida sharciga iyo xalaasha ah loo soo doortay adiguna wxaad tahay maayarkii caasimada ummaduna way kuu siman tahay anaguna bulshada Somaliland ayaanu ka mid nahay, markaa sidii kuwii hore aad ula shaqayn jirtay anagana noola shaqee.” Ayuu yidhi xoghayaha Naqafo.
Previous PostMadaxweyne Ku xigeenka oo dhagax dhigay dhisme DAHABSHIIL u dhisayo Jaamacada BurcoNext PostMadaxweyne Siilaanyo oo xilkii ka qaaday Wasiirkii Warfaafinta	Blog